အဆိုပါဖော်ပြထားသောပင်မ Idea များအတွက် Reading
ကျနော်တို့ကဖော်ပြထားအဓိကစိတ်ကူးမဟာဗျူဟာများနှင့်လှည့်ကွက်သို့အရအလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌ပထမဦးဆုံး, သငျသညျအဓိကစိတ်ကူးကိုပထမဦးဆုံးရာအရပျတှငျအဘယျသိရန်ရှိသည်။ တစ်ဦးပါမောက္ခသို့မဟုတ်ဆရာမတစ်ဦးအပိုဒ်, စာစီစာကုံး, အခနျးသို့မဟုတ်ပင်စာအုပ်၏အဓိကစိတ်ကူးဆုံးဖြတ်ရန်ရန်သင့်အားတောင်းသည့်အခါကဘာကိုဆိုလိုသလဲ တစ်အပိုဒ်, စာစီစာကုံး, ဒါမှမဟုတ်အခန်း၏အဓိကစိတ်ကူးကျမ်းပိုဒ်၏အချက်ဖြစ်ပါသည်, အနုတ်အားလုံးအသေးစိတ်။ အဓိကစိတ်ကူးကြီးတွေရုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာသူတို့သင်နောက်ဆုံးစနေနေ့ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုသင်မေးဖို့အခါသင်ကလူကိုပြောပြယျ။ သင် "ငါရုပ်ရှင်သွား၏" အစားဟုဆိုတတ်စေခြင်းငှါ, ငါသူအပေါ်တစ်ဦးအသက်တာသစ်ကိုစတင်ပါရန်သူ၏ရှည်လျားသော-ပျောက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အတူတက်ကမ္ဘာဂြိုဟ်နှင့်အသင်းများကိုထမှုတ်ဘယ်မှာ Channing Tatum ရဲ့အသစ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့သွားကြဖို့ရထားပေါ်တွင် hopped ပလူတို။ ငါပေါက်ပေါက်စားရကြ၏သန့်စင်ခန်းအသုံးပြုငါ့လက်ကိုဆေးကြော, ထို့နောက်ပြဇာတ်ရုံ left ပြန်, ငါ့တိုက်ခန်းသို့သွားကြ၏။ အဓိကစိတ်ကူးအစားအသေးစိတ်အချက်အလက်ကို၏အထွေထွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာဂြိုလ် vs. အဆိုပါနေရောင်ခြည်စနစ်ပါပဲ။ ဒါဟာပရိသတ်တွေ, cheerleader, quarterback နှင့်ယူနီဖောင်း vs. ဘောလုံးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအော်စကာ vs. သရုပ်ဆောင်တွေ, အနီရောင်ကော်ဇော, ဒီဇိုင်နာဝတ်ရုံနှင့်ရုပ်ရှင်ပါပဲ။
ဒီတော့ဘယ်လောက်သင်ဖော်ပြထားအဓိကစိတ်ကူးရှာရမလဲ? ကောင်းမွန်သောသတင်း? ဒါဟာအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောအဓိကစိတ်ကူးထွက်ရှာဖွေနှိုင်းယှဉ်တကယ်လွယ်ကူသည်။ အသေးစိတျအဘို့အပေါ်ကိုဖတ်ပါ။
တစ်ဦးဖော်ပြထားသောပင်မ Idea ဆိုတာဘာလဲ
ဒါဟာစာသားထဲမှာတိုက်ရိုက်ရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ လက်ျာဘက်ထွက် လာ. ထိုအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးများအတွက်ကျမ်းပိုဒ်များတွင်အဓိကစိတ်ကူးရေးလိုက်စာရေးဆရာတစ်ခါတစ်ရံတွင် - သူတို့သင်မှတ်လက်လွတ်ချင်ကြဘူး, သူတို့ကအသစ်သောစာရေးဆရာများဖြစ်ကြပြီးပရိယာယ်များ၏အနုပညာကိုထွက်နေသေးတယ်ကြပြီမဟုတ်, သူတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်း, သတင်းအချက်အလက်အရေးအသားကြိုက်တယ် ။ မည်သို့ပင်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်အဲဒီမှာသင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေရဲ့; သင်ရုံရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အဆိုပါဖော်ပြထားသောပင်မ Idea ကိုရှာပါရန်မည်သို့
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကား, တဦးတည်းအတိုဝါကျအတွက်အဖြေကိုရှင်းပြပါ။ စာသားအနေဖြင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသို့မဟုတ်ဥပမာပါဝင်သည်မထားပါနဲ့။ သငျသညျခေါင်းစဉ်အကြောင်းကိုတစ်တန်ကိုသိရလျှင်ပင်, စာသားတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားအဘယျသို့ကျော်လွန်သင့်ရဲ့စိတ်ကူးတိုးချဲ့မထားပါနဲ့။ ဒါဟာဒီလေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်အရေးမထားဘူး။
ဖော်ပြထားပင်မ Idea ဥပမာ:
အင်တာနက်ကိုပြီးသားမူဝါဒများနှင့်ဥပဒေများ, အစိုးရအရာရှိများနှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သောကမ်ဘာပျေါတှငျတည်ရှိသောကြောင့်, လက်ရှိဥပဒေများနှင့်လူအများ၏အသံမှုကိုထော, အင်တာနက်ရဲ့စည်းမျဉ်းများအတွက်နောက်ဆုံးမှာတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်သင့်သည်။ ဒီတာဝန်နှင့်အတူများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစီမံခန့်ခွဲခြင်း၏ကြီးမားသောအလုပ်တခုကိုလာ ပထမဦးစွာပြင်ဆင်ရေး ဟာကမ္ဘာ့တလွှားလူမှုရေးနှင့်အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားဂုဏ်ပြုခြင်းနှင့်အတူအခွင့်အရေးများ။ သူကပြောပါတယ်ခံရ, အဆုံးစွန်တာဝန်နေဆဲမဲပေးသူကိုအင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏လက်၌ကျိန်းဝပ် - သူတို့က, အရာရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းတက်အောင်, သူတို့အစေခံရန်ရွေးချယ်တင်မြှောက်နှင့်အတူ။ မဲဆန္ဒရှင်သင့်လျော်သောပို့စ်များကိုမှတာဝန်ရှိတစ်ဦးချင်းစီကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ရန်နိုင်စွမ်းရှိသည်, နှင့်ရွေးချယ်တင်မြှောက်အရာရှိတွေကလူမျိုး၏အလိုတော်အပေါ်ပြုမူဖို့တာဝနျရှိ ..
ဒီမှာအဓိကစိတ်ကူး " ... အစိုးရအရာရှိများ ... အင်တာနက်ကို၏စည်းမျဉ်းများအတွက်နောက်ဆုံးမှာတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ " ဖြစ်ပါတယ် ကတိုက်ရိုက်စာသား၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ကြောင့်တစ်ဖော်ပြထားအဓိကစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဝါကျအပြည့်အဝတစ်ခုလုံးအဖြစ်ကျမ်းပိုဒ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို encapsulates ။ ဒါဟာကျမ်းပိုဒ်များ၏နယ်ပယ်အပြင်ဘက်စာသားချမှတ်ခြင်းအခြကျော်လွန်မသွားဘူး, မကြောင့်သော်လည်းကောင်း, ကအတွင်းရှိကျမ်းပိုဒ်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုကိုသုံးပါဘူး။
တစ်ခုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောပင်မ Idea Find လုပ်နည်း
ပင်မ Idea အလေ့အကျင့်
သူတို့အားအဓိကစိတ်ကူးအာဏာကိုပြဖို့လိုပါသလား? ဤတွင်အချို့ လေ့ကျင့်ဖို့သင်ထောက်ကူ!
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုများ၏ Day ကိုလုပ်ပါရန်5အရာ
25 အကြီးမြတ်ဆုံး NAS သီချင်းများ
ဖော့ဒျခ Hayes - အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏ကိုးကသမ္မတ
Meredith ကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
အင်္ဂလိပ်သင်ယူသူများအတွက်မိသားစု Related ဝေါဟာရ
အီတလီတွင် 'ငါကိုသင် Love' 'ဟုပြော 100 နည်းလမ်းများ
ဠာ: တစ်ဦးက Spacetime Odyssey သွန်သင် Tools များ
သံမဏိနှင့်လူမီနီယမ် Scuba Tank အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ?
Alpha Decay ၏အဓိပ္ပာယ်
တစ်နံပါတ် (Delphi Format ကို) မှဦးစီးသုညထည့်သွင်းနည်း
ကျနော်တို့အများစုမှာအမုန်း 10 အသံ
ဂရိတ်အားလပ်ရက် Gap ပဟေဠိဖြည့်ပါ
ပတ္တမြားအတွက်ကျပန်းနံပါတ် Generate ကိုဘယ်လို
မာရိကဒိုင်ယာ, ကိုလိုနီမက်ဆာချူးဆက်အတွက် Quaker အာဇာနည်ဗိမာန်
အီတလီနိုင်ငံအတွက် Renaissance ၏ယဉ်ကျေးမှု
တစ်အွန်လိုင်းမူလတန်းကျောင်းအတွက်သင့်ကလေးစာရင်းသွင်း7အကြောင်းရင်းများ
ကယ်ဆယ်ရေး signal များအတွက်မြေပြင်-to-air အရေးပေါ် Code ကိုသိကြ
တို့သည်သမ္မတအိမ်တော်အိမ်ထောင်ဖက်ရှေးခယျြကို run လိုက်တဲ့အခါ?